प्रकाशित: २०७७ असार २३, मङ्गलबार
जुन १३, २०२० मा म काठमाण्डौ देखि पोखरा जाने क्रममा डुम्रेको के-ओ-एस पेट्रोल पम्पमा गाड़ीमा पेट्रोल हाले। त्यसपछि सँगैको पसलबाट खाने कुरा, जूस, पनि इद्यादि किने। जहाँ सौचालयको पनि राम्रो बन्दोबस्त थियो।हामी गाड़ीमा भरी तेल हालेपछि आफ्नो गन्तब्य पोखरा तिर लागियौ। लकडाउनको कारण काठमाण्डौ देखि पोखरामा निर्माण हुदै गरेको आफनै निर्माणधिन प्रोजेक्टमा जान पाइएको थिएन। किनभने आर्किटेक्ट र इंटिरीअर डिजाईनर सरहरुलाई समय समयमा फ़ील्ड भिज़िट गर्नु पर्ने हुन्छ। लकडाउन को ८३ दिनमा बल्ल तल्ल पास मिलेको थियो। सरकारले निर्माण कार्यको लागि आवत जावट सहज बनाएको थियो।
पोखरा पुगेको २ दिन पछि बाहिर जान लाग्दा चस्मा खोज्यौ, तर चस्मा कही पनि भेटिएन्। त्यसपछि सोचे, रूम तिर होला। भोलि पल्ट सारा ठाऊमा खोज्दा पनि भेटिन। मलाई लाग्यो अब यो कतै बाटो मै झर्यो। सारै दुःख लाग्यो मन पर्ने आफ्नो कालो चस्मा हराउदा । दुःख पनि किन नहोस त, ४५,००० रुपैयामा किनेका थिए।
लगभग २४ दिनको काम पछि हिजो पोखराबाट काठमाण्डौ लागि हिडियो।
लगभग दिऊसो ३-३० बजे पोखराबाट छुट्यौ। बाटोमा सवारीको खासै चाप थिएन। डेर घण्टा मै डुम्रेको पेट्रोल पम्प पुगे र फेरि पेट्रोल फुल गर्न भने। मनमा एऊटा खुलदुली थियो, की शायद मेरो कालो चस्मा २४ दिन अघि यही त छुटेन् ?
मैले काउन्टरको भाईलाई सोधे। भाई ३ हप्ता जति पहिला यहाँ काउन्टरमा कुनै कालो चस्मा भेटेको थियो ?
त्यतिकैमा पेट्रोल पम्पका साहु हुन या मैनेजरले भने, छ सर। मैले आफ्नो चस्मको बर्नन गरे र मिल्यो। मेरो मुखमा हर्षको हासो आयो। जुन सामान हराई सक्यो, पाउन सक्ने कल्पना नै नगरेको र आफुलाई मन पर्ने सामान पाउदा एक किसिमको अलग्गैको खुशी आउने रहेछ।
म त दंग परे र भाईहरुलाई एक दम धन्यबाद दिए। मैले उनीहरुलाई केहि बाक्सिस दिए तर उहाँहले लिन मान्नु भएन। उनीहरुले भने, हामी सबैको छुटेको सामान सुरक्षित राख्छौ। हामीले धेरैको पैसाको पर्स, पास्पोर्ट ब्याग, झोला, फोन आदि इस्यादि जे छोड़े पनि पछि सम्बन्धित मान्छे आएमा चेक गरि फिर्ता गर्ने गरेका छौँ । यो हाम्रो धर्म र कर्म हो। हाम्रो ग्राहकको खुशी नै हाम्रो खुशी हो भन्नु भयो, जुन म आफैले पनि महसुस गरे।
समग्रमा, आजकलको जमनामा ईमानदार र असल मान्छे भेंटन गाह्रो हुन्छ। तर मैले भेंटे। म खुशी भए। मैले कालो चस्मालाई सफा गरि टक्क लगाएर काठमाण्डौ तिर लागियौ। भगवानले यी भाईहरु जस्तै धेरै राम्रा र असल मान्छेहरुको सदा भलो गरुन।
हामीले पनि कहिलै अरुलाई ठग्ने, चोर्ने, लुटने काम गर्नु हुँदैन। हामी ईमानदार, असल र राम्रो मान्छे हुनुपर्छ। ज़िन्दगीमा यदि कसैलाई सहयोग गर्न सकिएन भने पनि उसलाई दुःख पनि दिनु हुदैन।
टासी गुरुङको लकडाउन यात्राको अनुभव।
पर्यटन ब्यवसायी, समाज सेवी, राष्ट्र सेवक।